हुड USD1.1-USD2.3 संग चीन बच्चाहरू रेनकोट निर्माता र आपूर्तिकर्ता | सँधै
हुडको साथ भर्खरको डिजाइन PVC कार्टुन रेनकोट। लोचदार कफ र प्यारा मुद्रणको साथ, आर्थिक मूल्य र प्यारो मुद्रणको कारण। यो धेरै लोकप्रिय छ।
उत्पाद नाम: जलरोधक रेनकोट
आउटडोर गतिविधि: शिविर, पैदल यात्रा
रेनकोट / वर्षा-प्रमाण प्यान्ट्स / वर्षा केप: रेनवेयर
पोन्को शैली: एकल-व्यक्ति रेनवेयर
लि :्ग: विश्वव्यापी
उमेर समूह: बच्चाहरु
उत्पतिस्थान: हेबै, चीन
ब्रान्ड नाम: FB
मोडेल नम्बर: FB2028
रंग: बैजनी, गुलाबी, निलो, रातो वा अनुकूलित
मोटाई: ०.०२ मिमी, ०.33 मिमी, ०.55 मिमी, ०.88 मिमी, ०.२ मिमी
तौल: 180g-220g को बारेमा
लोगो: कस्टम लोगो प्रिन्टिंग
MOQ: २००० पीसी
प्याकिंग: १ पीसी / opp बैग
१ बैग / टुक्रा
प्रति इकाई वजन: लगभग १80०g-२२०g
कार्टन आकार: * 37 * २ * * २cm सेमी
एकाई प्रति कार्टन: p० पीस
कार्टन तौल: लगभग १२ किलोग्राम
नेतृत्व समय: जम्मा प्राप्त भएपछि s० दिनपछि
भुक्तानी र वितरण: भुक्तानी विधि: T / T, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, L / C
वितरण विवरण: confir०-50० दिन भित्रमा अर्डर पुष्टि गरे पछि
सानो अर्डर मूल्य स्वीकार
शीघ्र वितरण सेवा
गुणवत्ता अनुमोदन नमूना उपलब्ध छ
प्याकिंग उत्पादन प्रदर्शन
प्रतिष्ठा फ्रिक्वेन्सी अनुकूलित
अघिल्लो: डिस्पोजेबल पीई आपतकालिन वर्षा poncho USD0.12-USD0.3
अर्को: बच्चाहरूका लागि आउटडोर प्यारा वर्षा पोन्चो USD1.1-USD1.8
Q: के तपाइँ OEM र ODM स्वीकार गर्नुहुन्छ?
A: हो, हामी OEM र ODM स्वागत गर्दछौं
प्रश्न: तपाईंको भुक्तान विधि के हो?
A: हामी TT, Paypal, दृढ एल / सी नजरमा, वेस्टर्न यूनियन स्वीकार गर्दछौं
Q: के म गुणवत्ता जाँचको लागि केहि नमूनाहरू पाउन सक्छु?
A: हो, हामी तपाईंलाई नमूना प्रस्ताव गर्न खुसी छौं र हामी तपाईंको आवश्यकता अनुसार नमूना सेवा प्रदान गर्दछौं। नमूना नि: शुल्क वा विशिष्ट अवस्थामा निर्भर चार्ज गर्न सकिन्छ। ग्राहकहरु लाई नमूनाहरु को लागी भाडा शुल्क तिर्नु पर्छ।
प्रश्न: तपाईंको सामान्य लोडिंग पोर्ट के हो?
A: लीड समय उत्पादनहरूको प्रकार र अर्डर मात्राको आधारमा भिन्न हुन्छ।
Q: तपाईं गुणवत्ता नियन्त्रण कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
A: गुणवत्ता सधैं हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो। हामी शुरू देखि अन्त सम्म गुण नियन्त्रण मा धेरै ध्यान दिन्छौं। हामीसँग प्रत्येक आईटमको लागि धेरै विस्तृत QC कागजातहरू छन् र हाम्रो QC टीमले प्रत्येक शिपमेन्टको पूर्ण निरीक्षण गर्दछ।
Q ： शिपिंग सेवा
A: हामी समुद्री / हवा / कुरियर यातायात र समन्वयको व्यवस्था गर्न सक्दछौं अन्य विक्रेताहरु संग तपाईंको लागि।
बच्चाहरू पीभीसी रेनकोटहरू
Pvc वर्षा कोट महिलाका लागि
पीवीसी वर्षा सूट
भारी शुल्क पॉलिएस्टर लेपित PVC वर्षा poncho को लागी ...
अनुकूलित रंगीन नरम १००% वाटरप्रूफ पोलीर ...
Kids Pu रेनकोट, पेवा रेनकोट, पीभीसी रेनकोट, पीभीसी पोंचो, पु रेनकोट, वर्षा कोट महिला,